Home Advisory & Ec Member Objectives of MPHA Activities of MPHA Future Plan of MPHA Contact Us
Activities of MPHA
Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/ideaswc1/public_html/www-myanmarmpha-org/connection.php on line 2
Latter-Day Saint Charities, Community Development Association & Myanmar Physically Handicapped Association participate to donation ceremony of 65 below knees, 8 above knees artificial legs &5Wheelchairs at Kyauk Gyi Tsp; East Bago Region on 24th, August 2015, Monday at 13:00 P:M
MPHA & INCHEON DENTAL ASSOCIATION DISCUSSION 11-6-2015 ♿️♿️♿️♿️♿️
မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်အင်္ဂါမသန်စွမ်းသူများအသင်း ၏ လုပ်ငန်းများကို ကိုယ်စွမ်းဥာဏ်စွမ်း ရှိသမျှ ကြိုးစားကြသော အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးအေးကိုကို ဦးဆောင်၍ နိုင်ငံတကာ နှင့် ပြည်တွင်းအလှူ ရှင်များ အား ရှာဖွေလျက် မသန်စွမ်းသူများအား ပိုမိုထောက်ပံ့ပေးနိုင် အောင် ဆောင်ရွက်နေကြသော ရုံးအဖွဲ့ဝင်များ
မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်အင်္ဂါမသန်စွမ်းသူများအသင်း မှ အားကစားသမားများ အမှတ်တရပုံ
မသန်စွမ်းသူများ၏အဓိကအခက်အခဲသည်လှုပ်ရှားသွားလာရန်မလွယ်ကူမှုပင်ဖြစ်သည်။ မည်သို့သောအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသည်ဖြစ်စေ မသန်စွမ်းများအတွက် သွားလာမှုခက်ခဲသဖြင့် အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုများအားမရရှိ မခံစားရပါ။ ထိုသို့သော အခက်အခဲများကို ကျော်လွှားနိုင်ရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်အင်္ဂါမသန်စွမ်းသူများအသင်းမှ မသန်စွမ်းသူများထံသို့ အရောက်သွား၍ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသော ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအား (၁၃/၉/၂၀၁၂)ရက်နေ့မှ စတင် အကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင်လိုက်ပြီဖြစ်ပါသည်။
Copyright 2011 ~ 2016 MYANMAR Physically Handicapped Association. All right reserved. Powered by IDEA SPACE.